आयोजक नगरपालिका जनप्रतिनिधि आएनन्::Online News Portal from State No. 4
१० औं गणतन्त्र दिवस मनाईयो
बागलुङ, १६ जेठ– मंगलबार बागलुङमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर दशौं गणतन्त्र दिवश मनाईएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रभातफेरी, धौलगिारी अञ्चल अस्पतालका बिरामी र जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीलाई फलफूल वितरण र प्रवचन कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गणतन्त्रको संस्थागत बिकासका लागि सबैले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै जनताको भावना अनुसारको शासन संचालन गरेर मात्र यसको संस्थागत बिकास गर्न सकिनेमा उनीहरुको तर्क थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेतृत्वले लामो संघर्षबाट गणतन्त्र ल्याएको भन्दै अब जनतालाई व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्ने बताए । उनले राजतन्त्रको अन्त्यपछि फेरी धेरै राजाहरुको शासनबाट जनताले उन्मुक्ति चाहेको भन्दै सुशासनको प्रत्याभूति समेत दिनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कृष्ण पाठक, राजिब घिमिरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका थानेश्वर सुवेदी, संघिय समाजवादी फोरमका भक्तबहादुर बिक, उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठ नयाँ शक्ति पार्टीका चित्र सापकोटा लगायतले बोलेका थिए ।
अखिलनाथ शर्माको संचालन र नगरपालिका प्रशासकीय प्रमुख नारायण सापकोटाको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । दिवश मनाउनका लागि व्यानरमा जिल्ला समन्वय र बागलुङ नगरपालिकाको आयोजक लेखिएको थियो । तर कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसहित वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य समेत कोही उपस्थित थिएनन् । आयोजक बागलुङ नगरपालिका लेखिएको व्यानर बोकेर महिला बिकास कार्यालयका कर्मचारी अगाडि हिडेका थिए । पछि–पछि जिल्ला तहका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी थिए । कार्यक्रममा प्रभातफेरी, बिरामी र कारागारका बन्दीलाई फलफूल बितरण तथा प्रवचन कार्यक्रममा समेत उनीहरु कोही पुगेनन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना र उपप्रमुख बिष्णु भूषाल भने सहभागि भए । ‘राजनीतिक भाषणमा नेताहरुले चर्को भाषण गरेपनि दिवश मनाउन कोही आएनन्’ एक कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी नगएको भए गणतन्त्र दिवश असफल हुने रहेछ ।’ बागलुङको मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा नं. १, २ र ३ का वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य समेत दिवश मनाउने कार्यक्रममा उपस्थित नभएपछि धेरैले अनौठो मानेका थिए । ¥याली बाटोमा भेटिंएका सदस्य र कर्मचारी पनि छेउमा उभिएर हेरेका थिए ।
नगरपालिका भित्रकै कर्मचारी समेत व्यानरमा लेखिएको नामले दंग परेको बताउँदै थिए । ‘आयोजकमा हाम्रै नाम रहेछ, तर हामीले थाहा पनि पाएनौं’ नगरपालिकाका ईन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले हामीलाई पनि खवर गरेनन् ।’ नगर प्रमुख जनक पौडेल तथा उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का सोमबारको एक कार्यक्रममा पोखरा गएका थिए । उक्त कार्यक्रममा उनीहरु फर्के नफर्केको जानकारी समेत पाउन नसकेको ढुंगानाले बताए । ‘उहाँहरु आफ्नै व्यानरको कार्यक्रम भएपनि नआएका धेरै उदाहरण छन्’ ढुंगानाले भने, ‘सार्वजनिक चासो र राजनीतिक महत्वको कार्यक्रम बारे बेवास्ता गरेर राजनीतिक दलको नेता कसरी बन्ने ?’ कार्यक्रमका अधिकांस गतिविधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले आँफै उद्घोषण गरेका थिए ।